ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာ လမ်းညွှန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာ လမ်းညွှန်	4
ဗုဒ္ဓ၏ အရိယသစ္စာ လမ်းညွှန်
Posted by ashinariya on Mar 31, 2011 in News |4comments
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အရိယသစ္စာတရားနှင့် ဗြဟ္မဏ၀ါဒ ပရ­မတ္တသစ္စာဒဿနတို့နှင့် ဗုဒ္ဓ၏ ကံ/ ဂျိန်းကံတို့အား ကွဲကွဲပြားပြား သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ­္ဓဓမ္မစီးဆင်းခဲ့သည့် အတိတ် သမိုင်းကို သေသေချာချာ လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။ သမိုင်းကို မသိရင် လူအ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သမိုင်း ပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုထားပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့ သမိုင်းကို တလွဲသိနေရင် ရူးလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ ရိုးရာစွဲ၊ ဆရာစွဲ၊ နည်းစွဲ၊ ၀ါဒ စွဲများဖြင့် အသိဉာဏ်များ မပိတ်ထားကြပါနှင့်။ ဖွင့်ထားသော မျက်စိ၊ နား၊ ဉာဏ်တို့ဖြင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာကြပါ။
ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀စွဲ ဂျိန်းဝါဒ စိတ်ကူးယဉ်အယူအဆနှင့် လူ့တန်ဘိုးမဲ့အောင်၊ လူ့ဝတ္တ ရားတွေ ပျက်ကွက်အောင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒ ပရမတ္တသစ္စာ ဗြဟ္မဏဒဿနတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်း ခြင်း ခံနေရသော ဗုဒ္ဓ၏ ရိုးရှင်းသည့် အရိယသစ္စာနှင့် ကံကိုသိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀အစွဲနှင့် ပရမတ္တသစ္စာဒဿနတို့ဖြင့် အိပ်ပျော်နေကြသော မိတ်ဆွေများ အိပ်ခြင်းမှ နိုးထနိုင်ကြပါစေ။
ဓမ္မ E-book စာအုပ်များ လေ့လာလိုပါက http://sites.google.com/site/ sayamvasi/toe-bookspage အင်တာနက် လိပ်စာတွင် download ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ လေ့လာဖို့အတွက် နောက်ထပ်လိပ်စာကတော့ http://myanmarengineer.org/forums/archive/index.php/t-2632.html ဖြစ်ပါတယ်။
Mp.3 အသံတရားများကို http://ariyadhamma.multiply.com/အင်တာနက် လိပ်စာတွင် download ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
View all posts by ashinariya →	Blog
bigcat says: ရွာထဲမှာ ဆရာတော်ဦးအိန္ဒက္ကအပြင် ဆရာတော်နောက်တပါး တိုးလာလို့ ဝမ်းသာရပါသည်။ ပုံမှန်ဖတ်နေကြ ဘာသာရေးဆုံးမစာများနှင့် ရေးသားပုံမတူသော လူပြိန်းများ လူမိုက်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မည့် စာများကို စောင့်မျှောလျက်ရိပါကြောင်း ရှိခိုဦးတင် လျောက်ထားပါသည် အရှင်ဘုရား။
Was this answer helpful?LikeDislike 1991
char too lan says: ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀စွဲ ဂျိန်းဝါဒ စိတ်ကူးယဉ်အယူအဆနှင့် လူ့တန်ဘိုးမဲ့အောင်၊ လူ့ဝတ္တ ရားတွေ ပျက်ကွက်အောင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒ (ဘယ်လိုဝါဒမျိုးလဲ တပည့်တော် သိပါရစေ)
ပရမတ္တသစ္စာ ဗြဟ္မဏဒဿနတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်း ခြင်း ခံနေရသော (ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပါလဲ တပည့်တော် သိပါရစေ)
ဗုဒ္ဓ၏ ရိုးရှင်းသည့် အရိယသစ္စာနှင့် ကံကိုသိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ် ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀အစွဲနှင့် ပရမတ္တသစ္စာဒဿနတို့ဖြင့် အိပ်ပျော်နေကြသော မိတ်ဆွေများ (ဘယ်လိုလူမျိုးများပါလဲ တပည့်တော် သိပါရစေအရှင်ဘုရား….) အိပ်ခြင်းမှ နိုးထနိုင်ကြပါစေ။
Was this answer helpful?LikeDislike 53
ashinariya says: ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀စွဲ ဂျိန်းဝါဒ စိတ်ကူးယဉ်အယူအဆနှင့် လူ့တန်ဘိုးမဲ့အောင်၊ လူ့ဝတ္တ ရားတွေ ပျက်ကွက်အောင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒ (ဘယ်လိုဝါဒမျိုးလဲ တပည့်တော် သိပါရစေ)
ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀အစွဲနှင့် ပရမတ္တသစ္စာဒဿနတို့ဖြင့် အိပ်ပျော်နေကြသော မိတ်ဆွေများ (ဘယ်လိုလူမျိုးများပါလဲ တပည့်တော် သိပါရစေအရှင်ဘုရား….) အမေးအတွက်
အကြံပေးခြင်တာက http://ariyadhamma.multiply.com တွင် ရှိသော တရားတော်များကို တစ်ပုဒ်ချင်း သေသေချာချာနာကြားကြည့်ပါ။
မိမိအယူနဲ့ တူမတူ တိုက်ကြည့်ပြီး နာကြားတာထက် ဟောကြားထားသည့်ဆရာတော်၏ ဆိုလိုချက်ကို ထိထိမိမိ သိရှိအောင် နာကြားပေးပါ။
Was this answer helpful?LikeDislike 98
meengelay says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Comments By Postဇလုံတောင်ဘုရား မရောက်ဖူးသေး သူများနှင့် ဘုရားသမိုင်း - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ရေတွေကနိမ့်ရာကနေ မြင့်ရာကိုစီးဆင်းနေတဲ့နေရာ - Thint Aye Yeik - Mr. MarGaသူမတူတဲ့ မိန်းမသားများအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် - ဦးကြောင်ကြီး - kaiဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမယ့် ၂၁ရာစု၏တိုးတက်လာသော အသုံးဝင်နည်းပညာများ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့...ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ - ဦးကြောင်ကြီး - သျှားသက်မာန်"ပြည့် " - Thint Aye Yeik - aye.kkအားနာလွန်းလို့ ပါ - weiwei - Foreign Residentမတူညီသော အတွေးအမြင်များ - kai - weiwei" ဟိုမှာဒီမှာ " - Thint Aye YeikPromotion လေးတွေလာပါပြီ............................... - Foreign Resident - Thint Aye Yeikအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး...လာအိုသို့ - Foreign Resident - Thint Aye Yeikဖုန်းတွေ၊နာရီတွေပေါ်မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့(11:11)ရဲ့အဓိပ္ပါယ် - Mr. MarGa - Mr. MarGaအဝင်ကော - Mr. MarGa - ko six"ေ ကာက်ရိုးမီး" - weiwei - kaiကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကိုနေ့ ချင်းပြန်စရိတ်ငြိမ်းနဲ့ သွားကြမယ် - kai - etoneကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ၈ ဦး - kai - ko sixကျွန်တော်နဲ့ Dead Body (0:1) - kai - ko sixခရီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပိုးနိုင်ဖို့ သိထားရမယ့် အချက် (၁၅) ချက် - သျှားသက်မာန် - Thint Aye Yeikအရောင်ရင့်မှတ်တမ်း - ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၇ - kai - kaiMarijuana - ဆေးခြောက် - kai - ဇီဇီစာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၃)- အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့် - Thint Aye Yeik - ko six''ဤ''ကို ခပ်လွယ်လွယ်--ကျွဲချင်သူတွေ များလွန်းတော့လည်း... - Thint Aye Yeik - ဇီဇီဖွင့်မရတဲ့ ဦးနှောက် - ko six - ko sixချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား - ဇီဇီ - ၀င့်ပြုံးမြင့်ဘီယာသောက်တဲ့ ပုဇွန် - ဇီဇီ - ဇီဇီThe Sense of Traveling - ဇီဇီ - လုံမလေးမွန်မွန်စာပေတိုက်ပွဲခေါ်သံ(၂)-NEO-CLASSICISM တွေ ထွက်ခဲ့ဟေ့ - Thint Aye Yeik - ၀င့်ပြုံးမြင့်ကဗျာလေး မူးနေပြီ - ၀င့်ပြုံးမြင့် - ၀င့်ပြုံးမြင့်လေကြောင်းခရီးသွားသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေးသုံး Liquid-Gel-Spray ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုသယ်ဆောင်သွားမလဲ ? ? ? - Thint Aye Yeikအေးခဲနေသောအနောက်နိုင်ငံကနိုင်ငံများ........... - Thint Aye Yeikပြည်ပခရီးသွားများ၏မျက်စိကျ လည်ပတ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည့် မြန်မာ - Thint Aye Yeikချိုသာခွန်းဆက်, နှုတ်ဆက်ကြလျှင် - manawphyulay - aye.kkCategory	Arts & Humanities
ကျပ်တသိန်းသို့ Top 10alinsett (95683 Kyats )Anzartone (95532 Kyats )kyeemite (91703 Kyats )weiwei (83394 Kyats )SP (80986 Kyats )padonmar (76894 Kyats )blackchaw (76343 Kyats )Foreign Resident (59074 Kyats )monmon (58594 Kyats )Northern Onestar (56676 Kyats )FB	FB